Kuhlangana umntu unako ngokukhawuleza kuba leitmotif a ubomi. Yintoni enye ufumana ezama umntu ukuba end ubomi bakhe, umntu yokuchitha elungileyo ixesha omnye ngokuhlwa, okanye naluphi na olunye uhlobo budlelwane. Ngoko ke apha ke kancinci isikhokelo ukwazi apho kuhlangana umntu. Nantsi indawo apho ezininzi abantu ngathi ukuya unwind emva nzima imini, okanye ukuchitha a mnandi ngokuhlwa ngaphandle kwaye ngokwalo. Ke ngoko, ibar kuba indawo ukuya kuhlangana umntu, okanye nkqu abantu. Kodwa ke ingaba thatha ixesha elininzi ukuba rely ngomhla omnye-busuku-injalo.
Njengoko utywala flows ngathi ngamanzi kwaye tends ukutshintsha mbono ukuba omnye sele lomnye, kodwa kanjalo désinhiber. Ngokufutshane, masithi nathi lumkelani ezi ntlanganiso iindawo lula apho tomorrows ingaba rhoqo disappointing. Ngexesha dancing iinkwenkwezi, nightclubs ziphumo ukuthandabuza intlanganiso ndawo. Thina umdaniso kunye engaziwayo (e) s, omnye drinks, atmosphere ngu subdued kwaye upbeat. Into charm kakhulu emelanayo. Kodwa ke kwakhona, kunzima ukuya ngaphaya a busuku, ngenxa yokuba ekugqibeleni oko kukholisa ifumanise ngokwayo elandelayo mini ecaleni ka-ongaziwayo apho omnye hardly wakhumbula. Ukuba osikhangelayo intlanganiso enye ngokuhlwa, i-internet kukuba ngaphandle ukuthandabuza eyona ndlela yokufumana ulonwabo lwakho. Ngenxa yokuba yonke into ngokukhawuleza. Incoko kunye a stranger, umyalezo kwi okanye iqonga elithile, nkqu umyalezo ekupheleni a site intlanganiso, kwaye ukuqeshwa lwenziwa kuba kwangaloo ngokuhlwa. Kuyimfuneko ngokulula hayi xana ukuba abe cacisa kwi yintoni osikhangelayo kwaye hayi kakhulu kakhulu ukuba pack phambi kwentlanganiso ukuphepha nakuphi na disappointments. Kodwa internet kanjalo unako ukunceda wena ukufumana rare yexabiso elikhulu. Ngu-a icebiso ka-umonde sprinkled kunye kancinci ka-comment kwaye honesty macala. Kuba dating ezinzima, ikhethe kwinxuwa ezinzima kwaye yathi yayalela ngakulo iintlanganiso ukuze kukunika ubukhulu kunokwenzeka amathuba. Yintoni itno kuba ngcono kunokuba indawo apho omnye spends uninzi imini yakhe ukufumana uthando. Kwi-jika ye-copier, vending umatshini, cafeteria okanye yembombo ukutshaya, njengoko abaninzi iindawo apho ndinako fihla umphefumlo mate. Luncedo lento ukuba uyakwazi thatha ixesha lakho (hayi kakhulu kakhulu ngani na oza kuphulukana nayo) ukwazi okungakumbi malunga umntu uze ufakele complicity. Ukongeza, uzakukwazi ukuba moan kwi-chorus kwindlela yakho boss, ngaphandle kokuba ukuba nguye ndonwabe onyulwe ukuba abe. Ukongeza kuhlangana umntu emsebenzini unako rhoqo kukhokelela a budlelwane ezifihliweyo kwaye ngoko ke spicy. Ungummi omnye umzali, kwaye ungathanda ukuba ahlangane umntu, kodwa akunyanzelekanga a ngomzuzu kuwe kuba iintlanganiso. Kutheni ungavumeli uthatha jonga kwi abantu ukuba ubona yonke imihla kunye abantwana benu. Statistically, kukho ngokuqinisekileyo enye kwi-ulote. Kubalulekile ngokwaneleyo ukuvula lingqina. Ukongeza, abantwana benu ziindleko isihloko se ngxoxo ukuba ifunyenwe ukuqalisa incoko, ukuze okanye isiphelo unyaka bonisa looming. Awunokwazi okanye musa ufuna ukuya ngaphandle yedwa kwaye musa efana kakhulu kakhulu indimbane, akunyanzelekanga abantwana kwaye akukho mntu kufuneka emsebenzini. Kuyinto isisombululo. Kuhlangana abahlobo ongumhlobo wakho (e) s. kukho ngokuqinisekileyo kwi-ulote umntu esabelana ungakwazi ukwenza encinane end ka-indlela, okanye nangakumbi. Luncedo lento ukuba uza ubuncinane nolwazi ngokufanayo. Kwaye ke, abahlobo ongumhlobo wakho (e) s unako kuzala qualities ezingekho. Ngoko ke, nazo zonke ezi izimvo ka iindawo kuhlangana umntu kufuneka ukuchitha ngaphantsi evenings kuphela kwi-phambili i-turnip kwi-tv. Ngenxa yokuba ngobunye ubusuku ezimbini, kubalulekile ngoko ke kakhulu ngcono Umbulelo kuzo zonke yakho ingcebiso ukuze sibe bakholisa ukuba xana, ndibeke yonke into ngembalelwano kwaye ndiyathemba sizama ukuba indlela. Sele, ndiza kuzama ukusebenzisa kwaye athabathe ngakumbi ixesha kuba undressed kaninzi kangangoko kunokwenzeka kwaye kuzo zonke iimeko, kwaye kanjalo yiya ngakumbi ngakulo umntu complementary, kwaye kanjalo sazi njani ukuba uthi hayi abo banikela kum leisure, oko ndiyakwenza njenge malunga nesiqingatha. Molo bonke ndijonge kuba umntu ukwenza ubomi bam te jet akukho abantwana ndinguye isitshayina kwaye wena Kum, ndingathanda ukwenza kancinci ubungqina. Ndandidibana omnye wam eks ngobunye ubusuku kwi-ukuqeqesha. Ndaya emsebenzini. Sasivuya ehleli ubuso ngobuso, kwaye waqalisa ukuxoxa kunye nam.
Kwaba kakhulu aph
Kubalulekile ukuba naye ukuba ndandisele draged njengoko ndiye kakhulu kuyanqaphazekaarely engaziwayo. Nje amazwi ambalwa ukuba ukwabelana nani wam amava. Yinyaniso ukuba ibhokisi ngayo yenza lula iintlanganiso. Ndiya amaxesha ngamaxesha kwi bhokisi kwaye kusoloko kumnandi ngaphandle kokuba andiyazi kutheni encounters ndiza kwi bhokisi, zange yokugqibela ixesha elide
← Arabian Umhla kwi-Intanethi amalungu - Uphendlo Arab icacile yi-parameters inzala
Kuhlangana Isi-Icacile →